Umshini wokufaka uphawu wokushisa we-Pro-HS001 / lmpulse
Max uphawu 3.2m (10.5 ')
Umshini Welding 6mm
Isikhathi somjikelezo 4 ~ 6 imizuzwana
Amandla 110V / 50 / 60Hz 15 ~ 18KW
Ukucindezela komoya 6 ~ 9 ibha （kg / cm2）
Izinsiza kusebenza Ukushisa okushintshekayo
Ukushisa okushintshekayo ubude
Izinto ezahlukahlukene Ukufaka uphawu lwezinto ezahlukahlukene ezifana ne-SMS, i-PP, i-PE, i-Polymer, i-Foil, i-Tyvek ne-Nylon, indwangu engalukiwe, Indwangu engavukiwe ene-Poly, Izici zokuphepha ezitholakala ngaphambili nangemuva kweyunithi, Ziphethe izinhlobo ezahlukene zokushisa band ezifana tapered, flat, lwalugobile nokunye.
Izinzuzo zePresto Impulse sealer
❒ Hlangana kalula nemfuneko ye-AAMI Level 3 & 4 ngokuya nge-PB70 ejwayelekile ngokungaguquguquki
❒ Ukusetshenziswa okuhle kakhulu nge-PVC, i-PE, i-PU, i-PP "izindwangu ze-thermoplastic ezigqokiwe, ezilukiwe nezingezona ezelukiwe ；
❒ Isikrini se-Multilanguage touch screen se-HMI esinememori yokupheka ；
❒ Ukulawulwa kokushisa kwe-Multipoint ngokunemba P LC (± 3) P LC ukulawulwa kokushisa nokupholisa imijikelezo yokushisela okungaguquguquki ；
❒ Isikhathi esifushane se-cyele ngamasekhondi angu-4 ~ 6, ukusebenza okuthembekile kokubekwa uphawu
❒ Izici zokuphepha ezithuthukile ngokucindezela ingcindezi ；
●Izingubo zokuzivikela, kufaka phakathi imijiva yokuzihlukanisa, ingubo yokuhlinzwa ilawulwa ngamazinga nezindlela zokuhlola ezisungulwe yi-AAMI (I-Association for the Advancement of Medical Instrumentation). I-ANSI (i-American National Standards Institute) / i-AAMI PB70: i-2012 iyizinga elisungula uhlelo lokuhlukaniswa (amazinga 1-4) wezingubo zokuvikela ezisetshenziswa ezikhungweni zokunakekelwa kwezempilo ngokususelwa ekusebenzeni okuvimbela uketshezi kusetshenziswa izindlela zokuhlola ezilinganiselwe
●Izindinganiso ze-American Association for the Development of Medical Instrumentation (AAMI) zenzelwe ukusiza izinkampani zamadivayisi ezokwelapha ukuhlangabezana nezindinganiso zomhlaba wonke zokusetshenziswa okuphephile kwamadivayisi wezokwelapha. I-AAMI yezokwelapha i-ANSI / AAMI PB70: 2012, Ukwahlukaniswa kokusebenza kwe-Liquid Barrier Performance and Clothing Clothing kanye nama-Drapes Okusetshenziswa Ezikhungweni Zokunakekelwa Kwezempilo, Ukusetshenziswa ezikhungweni zezempilo ukuthola izindlela zokuhlonza ezisemqoka ekukhetheni izingubo zokuzivikela ezifanele kanye nemidramo efana nezingubo zezokwelapha ( IPfiedler Enterprises, 2016). Ukuhlukaniswa kwamasudi we-AAMI kuholela kumazinga amane wokusebenza kwesithiyo, kukalwa ngokuya ngezivivinyo ezijwayelekile ezilandelayo:
● I-AATCC 42-2017: Ilinganisa ukumelana kwezindwangu ekungeneni kwamanzi (AATCC, 2018).
● I-AATCC 127-2017: Ilinganisa ukumelana kwendwangu ekungeneni kwamanzi ngaphansi kwengcindezi ye-hydrostatic (AATCC, 2017).
● I-ASTM F1670-17: Linganisa ukumelana nezinto ezisetshenziswa ezingutsheni zokuvikela ukungena ngegazi lokwenziwa ngaphansi kwezimo zokuxhumana oketshezi njalo (ASTM, 2017).
● I-ASTM F1671-13: Linganisa ukungena kwamagciwane asebenza egazini usebenzisa i-surrogate microbe ngaphansi kwezimo zokuxhumana eziqhubekayo zamanzi (ASTM, 2013)
● Izinga le-AAMI
● I-ANSI / AAMI PB70 ejwayelekile: Ukuchazwa kwezinga eliphakeme lokuvikelwa lonyaka wezi-2012 kufaka phakathi ukuqonda izindawo ezibucayi zengubo nokuthi izinga ngalinye lokusebenza okuyizithiyo lisho ukuthini, ukuze ingubo enhle ikhethelwe ukusetshenziswa ngongoti bezempilo.
●Izindawo ezibucayi zezingubo zinezingubo nemikhono, zombili okuyizindawo eziyinhloko ezisengozini enkulu yokuchayeka kuketshezi kanye namagciwane athwalwa ngegazi. Ukuphakama kwezinga, kukhula isidingo sokuvikelwa okwengeziwe kwemigoqo kuyo yonke indawo ebucayi.
● IZINGA 1: Izinga eliphansi lokuvikelwa kwesithiyo soketshezi
● IZINGA 2: Izinga eliphansi lokuvikelwa kwesithiyo soketshezi
● IZINGA 3: Ukuvikelwa kwesihibe samanzi esimaphakathi
● IZINGA 4: Izinga eliphakeme kakhulu lokuvikela uketshezi negciwane
Umbiko wokuhlolwa we-AAMI 3 & 4 ku-Nelson lab
Kungani ungashisi i-ultrasonic?
● Igebe eliphakathi kophondo ne-roller libaluleke kakhulu ekusebenzeni kwe-welding, ngoba iningi lama-welders e-ultrasonic izikhala azikwazi ukulawulwa ngokunembile, ngaleyo ndlela ikhwalithi ye-welding ayinakuqinisekiswa ngomkhiqizo odinga kakhulu.
● I-welder ye-ultrasonic icishe ibe yimanuwali, isikhathi somjikelezo wenqubo side kakhulu kunokufakwa uphawu kokushisa (cishe kabili), futhi kuzoba nejika elide lokufunda labasebenza.
● Ukushisela kwe-Ultrasonic kuzodala izimbobo ezincane zepini ezingatholakali esweni elize ezokwehluleka umkhiqizo ngenxa yokungena kwamagciwane.
Ububanzi obuningi bokushisa kwebhendi
I-Presto Automation futhi ingumhlinzeki wezixazululo kuzo zonke izinhlobo zohlelo lokusebenza lwemboni
Langaphambilini Pro- 8002 okuzenzakalelayo facemask ukuhlolwa ezibukwayo umshini
Olandelayo: Umshini wokufaka uphawu wesikhwama / isikhwama
Njalo Heat Sealer
I-Healing Induction Sealer
Isivalo Esivikela Ukushisa
Ephathekayo Heat Sealer
Umshini Heat Sealer